बोलीमा चि’प्लिए नेता पन्त : भन्छन्- चो’ट पुगेको भए दुःख व्यक्त गर्छु – Khabarhouse
Khabar house | १६ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०८:२४ | Comments
काठमाडौं । सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा नेताहरू बारम्बार चि’प्लन थालेका छन् । शब्दको ख्याल नै नगर्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पदबाट हात धु’नु परेको थियो । तर पनि नेताहरूको ‘चेत’ आएको देखिँदैन । शुक्रबार बेलुका ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्तामा पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा, कांगे्रस र जसपा सहितको सरकारबन्दा चीन र भारत दुवैलाई ‘कम्फ’र्टेबल’ हुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको चौ’तर्फी आलो’चना भइरहेको छ ।
त्यो नचिस्सिँदै ‘स्त्रीद्वेषी’ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त आलो’चनाको केन्द्रमा छन् । उनले केही दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वली ‘गोरा पिडुँला देखाउँदै पोइल जान पाम’ भनेकै भरमा जिम्मेवारी पाएको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी आ’लोच्य बनेका छन् ।
रघुजी पन्तले आफू माथि गरेको ‘गलत टि’प्पणी वि’रुद्ध राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल वलीले कडा प्रतिवाद गरेकी छिन्‌। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पन्तको नी’चताको संज्ञा दिएकी छिन् । पन्तले एक कार्यक्रममा कोमल वलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पिँ’डुला देखाएर राष्ट्रिय सभा सदस्य भएको टिप्पणी गरेका थिए। ‘हामीले नेता मानेका रघुजी पन्त कति निच हुनुहुँदो रहेछ भन्ने बल्ल खुलेको छ।
पन्तजीलाई मेरो प्रश्न-तपाईंको पार्टीमा कुनै पदमा रहनुभएका महिला नेतृहरूले को कसलाई पिँ’डुला देखाएर त्यो स्थानमा पुग्नु भएको हो ?’ वलीले लेखेकी छिन्, ‘के यो देशमा महिला कुनै पदमा पुग्न तपाईको जस्तो द’रिद्र सोचको शि’कार हुनु पर्छ ?’ पूर्वीय दर्शनदेखि मानव विकासमा महिलाको उच्च सम्मान समाजको कसीमा उत्तीर्ण भएको भन्दै वलीले प्रकृतिले नै महिला र पुरुषको समायोजन गरेको बताइन्।
‘एक-अर्काको आदर सम्मानबिना समाजमा न्याय समानता र विवेकशीलताको अन्त हुन्छ, समाज हिंसातिर जान्छ र दया-करुणा जस्ता कुरा हराउँछन् । तसर्थ, एकले अर्कोलाइ सम्मान गर्नु जीवनलाई मर्यादित र सरल बनाउनु हो । तर, नेकपाका नेता रघु पन्तले महिलाहरूले प्राप्त गर्ने पदहरू पिँडुला देखाएर भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ-वहाँको मानव विकासका क्रममा बन्ने तन्तुहरू बीचैमा रोकिएको जस्तो छ,’ उनले भनिन्, ‘वहाँले प्रयोग गर्ने शब्दहरूले आफ्नो आमा-दिदीबहिनी सबैलाई अपमान गरेको छ। विवे कहीन मानिसको आलोचनाले आफैँलाई आलोचित गर्दछ, यस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गरेका राजनीतिक पार्टी र समाजको दु’र्घ टना कति टाढा होला?’
यस बिषयमा रघुजी पन्त प्रस्टीकरण दिएका छन् । उनकै प्रस्टीकरण जस्ताको तेस्तै : मैले बोलेको पूरै भिडियो राखिएको छैन । मैले बोलेको के थियो भने, नेकपा भित्र एउटा ‘पोइला जान पाम’भन्ने गीतजस्तो संस्कृति छ । अर्को, ‘उठ, जाग हे भोका नाङ्गा हो..’ भन्ने गीत गाउने संस्कृति छ । हामीसँग थुप्रै महिला हुनुहुन्छ । कोमल वली अहिले केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा आउनुभयो ।
उहाँ केन्द्रीय कमिटीमा आउँदा पार्टीमा विचार दिन सक्नुपर्छ । नीति दिन सक्नुपर्छ। कार्यक्रमहरू मार्फत् आफ्ना दृष्टिकोणहरू दिन सक्नुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने, जिम्मेवारी दिने कस्तालाई ? प्रतिस्पर्धा गरेका मानिसहरू दिने होला । केन्द्रीय कमिटीमा भएका मानिसहरूको योग्यता, क्षमता के–के हो ? केपी ओलीलाई यस्ता सबै कुरामा चिन्ता छैन । केपी ओलीले यस्ता कुरामा विचार पनि गर्नुहुन्न ।
उहाँलाई को मन लाग्छ, को बनाउँदा खुसी लाग्छ, त्यस्ता मानिसहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनुहुन्छ। महिलालाई ल्याउँदा पनि धेरै दुःख गरेको, कपाल फुलाएका, आजीवन यो पार्टीमा लागेका महिलालाई छाडेर आफूलाई मनपर्ने, मनपर्ने केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाउँदै हिँड्ने संस्कृतिले गर्दा नै नेकपा बिग्रन गएको हो । मैले भनेको सारमा यही हो ।
अगाडि बोलेको पनि काटेर पछाडि बोलेको पनि काटेर गलत मनशायले राखिएको छ । यो भिडियो राखिनुभन्दा अगाडि मलाई सोधिनु पनि पर्छ । सन्दर्भविहीन ढङ्गले अलिकति काटेर राखेर भ्रम पार्ने काम भएको छ । यस्तो कृत्यप्रति म खे’द व्यक्त गर्छ । मेरो मनशाय न महिला, न पु’रुष कसैलाई अपमानित गर्ने छैन । प्रतिक्रियामा जसरी, जुन ढङ्गले मलाई गाली गरिरहनुभएको छ ।
मेरो आलो’चकहरूले जुन प्रकारको निन्दा गरिराख्नु भएको छ । म यसप्रति कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न । सार्वजनिक जीवनमा आलो’चना पनि हुन्छ। प्रशंसा पनि हुन्छ। मैले कसैलाई अपमानित गर्ने ढङ्गले होइन कि, हामी ‘उठ, जाग हे भोका नाङ्गा..’ भनेर गीत गाउँथ्यौँ । तर पार्टीमा ‘पोइला जान पाम्’ जस्ता गीत–संस्कृतिले प्रश्रय पाउन थाल्यो । योग्यता, क्षमता, भएका थुप्रै मानिसहरू छन्, दुवैतिरको नेकपामा ।
जिम्मेवारी दिनेबेलामा त्यस्ता मानिसहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर टिप्पणी गरेको केपी ओलीको प्रवृत्तिलाई हो । त्यसलाई बङ्ग्याएर जसरी राखिएको छ, त्यसप्रति मलाई दुःख लागेको छ । व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई लक्षित गरेर भनेको होइन । मेरो भनाइले कोमल वलीलाई चोट पुगेको छ भने त्यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्छु ।